Izindaba - Imboni yamapayipi epulasitiki entsha yaseChina inesilinganiso sokukhula esisheshayo emhlabeni
Imboni entsha yepayipi lepulasitiki laseChina inesilinganiso sokukhula esisheshayo emhlabeni
Kusukela ngo-2000, ukukhiqizwa kwepayipi lepulasitiki laseChina kukleliswe endaweni yesibili emhlabeni. Ngo-2008, inani eliphelele lokukhishwa kwamapayipi epulasitiki eChina lafinyelela kumathani ayizigidi ezingu-4.593. Eminyakeni eyishumi edlule, imboni yepayipi lepulasitiki eChina yathuthuka ngokushesha. Umphumela ukhuphukile kusuka kumathani ayi-200,000 ngo-1990 kuya kumathani acishe abe yi-800,000 ngo-2000, futhi ugcine izinga lokukhula lonyaka cishe elingu-15%.
Ukusetshenziswa okuphansi kwezinto zeplastiki ze-HDPE ikakhulu kufaka phakathi amapayipi okuhambisa amanzi angaphandle, amapayipi okuhambisa amanzi afihlekile, amapayipi ejakhethi, amapayipi okwakha amanzi namapayipi okuhambisa amanzi, njll. Iningi lalezi zicelo ezingezansi zihlobene ngqo noma ngokungaqondile nemboni yezezakhiwo. Idatha yakhethwa ngonyaka ka-2000-2008 Ekuhlaziyweni, sathola ukuthi kunokuxhumana okuhle okuqinile phakathi kwemboni yamapayipi epulasitiki nendawo egcwalisiwe yezindlu.
平均 Izinga lokukhula eliphakathi kwamapayipi epulasitiki e-PPR ne-PE ngokuzayo lizoba likhulu kunelemboni yamapayipi: Njengamanje, iningi lamapayipi epulasitiki omhlaba jikelele wezinto ezahlukahlukene kanye nezakhiwo akhiqiziwe futhi asetshenziswa eChina. Ezinsukwini zokuqala, kwakukhona amapayipi amaningi epulasitiki e-PVC eChina. Zasetshenziselwa ikakhulukazi amapayipi kagesi kagesi namapayipi endle. Kodwa-ke, amapayipi e-PVC anokushoda okuthile maqondana nokumelana nesithwathwa, ukumelana nokushisa namandla. Izinga lokukhula kwemakethe lizoba ngaphansi kunalelo lamapayipi epulasitiki amasha (kufaka ne-PPR). , PE, PB, njll.), Izinga lokukhula kwemboni yepulasitiki entsha lidlulile ngama-20%, okube yinkomba yokuthuthuka kwepayipi lepulasitiki laseChina.